Ziphezulu izibalo zabahaqwa yi-Covid - Ilanga News
Home Izindaba Ziphezulu izibalo zabahaqwa yi-Covid
Ziphezulu izibalo zabahaqwa yi-Covid
UKHUZE umkhuba wabantu okubonakala sengathi sebencamela ukugojelwa yiCovid-19 besemakhaya, wakhuthaza ukuba baphuthume ezikhungweni zezempilo uma behlaselwe yilesi sifo, uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala (osesithombeni) ngesikhathi ekhuluma esigcawini sabezindaba izolo ngeSonto, eThekwini.
Uthe ngomhla ka-17 kwephezulu bawu-22, abantu abashonele emakhaya kanti isibalo sesifike ku-142 kubantu abashonele emakhaya selokhu lesi sifo saqala.
Ukhale ngezibalo eziphezulu zokuhaqeka kwezisebenzi zezempilo njengoba ethe njengamanje zilinganiselwa ku-7 891 kanti ezinsukwini eziwu-7 ezedlule zibonakale zikhula.
Njengoba uNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Zweli Mkhize eke wamemezela, uMnu Zikalala uthe uhlobo olusha lwaleli gciwane selutholakale ezifundazweni ezintathu okuhlanganisa nayo iKwaZulu-Natal.
“Okwamanje kabukho ubufakazi obuveza ukuthi leli gciwane linamandla kakhulu okudlula leli esilaziyo, kodwa lukhona ucwaningo olwenziwayo. Lokhu kusenza sikhathazeke kakhulu ngezibalo ezikhulayo zabathelelekile nabashonayo.
“Lokhu kusho ukuthi kumele sibhukule, sibhekane naso ngqo lesi sifo. Sizimisele ngokugxila ekufundiseni, ekugonqiseni asebehaqekile nokulandelela kulabo abangase babe sengcupheni yokutheleleka. Siyacela ukuba abantu bazinakekele ngokugqoka izifonyo, ukuhlanza izandla nokulandela imiyalelo abayinikiwe yezokuphepha noma ngabe bakuphi,” kusho uMnu Zikalala.
Uthi njengohulumeni bakhethe ukuyivala yonke imicimbi emikhulu, kanti nalabo abahlela imicimbi ezobhebhethekisa lesi sifo, bazobhekana nengalo yomthetho.
“Sinxusa abantu bagweme ukuhambela imicimbi njengemishado, imisebenzi yesintu, imidlalo yebhola njengoba kungezinye zezinto ezibhebhethekisa lesi sifo. Isikhathi esikusona, akusona esokuzikhohlisa,” kusho yena.
Udlulise amazwi okududuza umndeni kaMnu Thelumoya Zulu obeyimeya yaseMlalazi, odlule emhlabeni ngemuva kokugula isikhashana ngoMgqibelo. Uyiphikile imibiko yokuthi izikhungo zezempilo ziyagcwala ngokungaphezulu kwamandla.
Uveze ukuthi ukuqubuka kwesishingishane sesibili salesi sifo sekwenze nezivakashi eziningi zangabe zisakulangazelela ukuvakasha.
“Ukuvalwa kolwandle namapaki akusikhona okudale ukuba izivakashi zibe manqika, kodwa kunabantu abakhetha ukungavakashi okwamanje ngoba besaba ukuthi bangahaqwa yigciwane.
“Kukhona abakhanselile ngoba behaqwe yilona,” kusho uMnu Zikalala.
Previous articleUSuthu nokhisimusi kubalandeli
Next articleUlande izinkomo zelobolo onengoduso “eyisoka”